Abavelisi beZitya-abaThengi base China kunye nabaFundi
Indawo yokupheka ekhitshini ekhangela izixhobo zentamo U501S0500A
I-Brand CHECKEDOUT Item Code U501S0500A Ubungakanani BOKU-SIZE Amagama aphambili abapheki, izixhobo zentamo Fabric 65/35 poly / ikotoni GSM.235g Xinjiang Aksu ende-staple cotton, no-piling, no-shrink, no carcinogens, life service times 2 times as Idyasi yesiqhelo yesiqhelo. Ukuthunga I-Thread Polyester intambo ikwabizwa ngokuba yintambo yamandla aphezulu. Ihlala ibizwa ngokuba (ukukhanya kwentsimbi). Yeyiphi engahambelaniyo, i-shrinkage ephantsi, kunye nokuzinza okuhle kweekhemikhali. Ngenxa yamandla aphezulu, ukumelana kakuhle ne-abrasion, l ...
Indawo yokupheka ekhitshini ekhangela izixhobo zentamo U501S8500H
I-Brand CHECKEDOUT Item Code U501S8500H Ubungakanani INDLELA YOKUGQIBELA Amagama aphambili okokulinda izinto zokubamba, iinkosi zentambo Fabric T85 / R15 Ukuthunga Umsonto wePolyester intambo ukwabizwa ngokuba ngumtya wamandla aphezulu. Ihlala ibizwa ngokuba (ukukhanya kwentsimbi). Yeyiphi engahambelaniyo, i-shrinkage ephantsi, kunye nokuzinza okuhle kweekhemikhali. Ngenxa yamandla aphakamileyo, ukumelana okuhle kwe-abrasion, i-shrinkage ephantsi, i-hygroscopicity elungileyo kunye nokuchasana nobushushu, umsonto we-polyester ayihambelani ne-corrosion, ukumelana nethambisi, kwaye ayibuthi mbungu. Yongeza ...